Kufa Kwekutanga Kwekushambadzira Kunobuda | Martech Zone
Iko Kufa Kwekutanga Kwekushambadzira Kunobuda
China, January 30, 2014 Douglas Karr
Iyo SBA inofungidzira kuti mazana matanhatu ezviuru emabhizimusi evashandirwi anosanganisirwa gore rega rega. Havasi vazhinji vavo vanobatsirwa kubva kuzita rezita senge IBM kana Coca Cola. Kuti vararame vanofanirwa kutsvaga bhizinesi idzva.
Kunyangwe makambani makuru senge EMC, Cisco naHewlett Packard vane zvikwata zvakakura zvakazvipira kutsvaga bhizinesi idzva mune ese akaisirwa base pamwe nevengangoita vatengi. Pasina maitiro ekutarisira uye zviyero zvakayananiswa, ndizvo zvese zvavanozviitira ivo, izvo zvisingambofi zvakabudirira sedanho rinoshandisa ruzivo rwechikwata kuita kuti basa rese rekutsvaga rive nani nebasa rese rekutengesa.
The inbound Marketing indasitiri inozviitira yakasarudzika kana vazvimisikidza seimwe nzira isingadhuri yekutengesa kunze. Ruzivo rwedu nevatengi rwakaratidza kakawanda kuti kusanganiswa kweaviri kunosimbisa imwe neimwe.
Kuva neinobudirira inbound kushambadzira zano inogona kupa yakavandudzwa yekumaka uye kuvaka kuvimba, kuoneka uye chiremera chekambani. Iyo inogona kuunganidza inotarisirwa inotungamira mukutsvaga nekudyidzana masvikiro, kuunganidza hunhu dhata pavari, uye tambidza yako inobuda timu kutungamira kwavanonzwisisa zvirinani panguva iyo tarisiro iri kutsvaga kutenga.
Kuva neinobudirira nzira yekushambadzira yakabuda inokonzeresa hurongwa hwako hwekupinza nekupa wega kubata kune inbound lead. Mumiriri wekutengesa anobuda anogona kuvaka hukama neiyo tarisiro, kuvadzidzisa, uye nekupindura zvinobudirira kune chero zvinopesana zvingangove nazvo.
Kushambadzira kunobuda kunze kune zvakawanda zvakanakira ... inogona kuburitswazve zviri nyore, kuvhenekwa uye kuvharwa, kana kuwedzerwa uye kuderera kuti igadzirise zvinodiwa. Kunyangwe zvingangoda mari yepamusoro, mhedzisiro inofanirwa kufungidzirwa, nekukurumidza uye yakanaka.
Add a kushambadzira otomatiki chikuva sevatsigiri vedu Right Pane Inopindirana, mumwe chikumbiro manejimendi mhinduro se TinderBox (zvakare vatsigiri vedu), uye iwe unogona kuwedzera kushanda kwesimba rako rekubuda zvakanyanya… kudzikisa nguva iyo timu yako inobuda inofanirwa kushandisa kumabasa ekutungamira. Kugonesa kwekugonesa kunovhara gwanza rekushandisa panosangana uye inopinda uye inosangana.
Tags: inbound Marketingkushambadzira kunzeKugonesa Kugonesa
Douglas Karr Thursday, January 30, 2014
Uchishandisa Dhijitari Asset Management kuRondedzero Yemagariro Ekusimudzira
Zvakanakira Kubatana Kushambadzira
Stephen W. Anderson
Kukadzi 2, 2014 na4: 45 PM
Kushambadzira kwakabuda ndiko kuvaka kwandakaita bhizinesi rangu pakutanga, uye ini ndakabatsira vazhinji vezvemari kuvaka mabhizinesi avo futi. Kwete chete kufona, asi kutumira tsika promo mapakeji. Inoshanda uye inoshanda mushe kwandiri uye zviuru zvevamwe. Chokwadi chakakwana, pane basa rakawanda rinosanganisirwa, asi kusanganiswa kwekunze kunoitwa nekirasi uye nehunyanzvi inbound inoshanda zvakanakira mabhizinesi mazhinji.
Kukadzi 2, 2014 na5: 56 PM
Kubvumirana @stephenwanderson: disqus!
Kukadzi 17, 2014 na6: 55 PM
Zvinosetsa hazvo, kuti zano iri rinowana sei yakaipa yakaipa PR, kana ichigona kushanda zvakanyanya.
Kukadzi 5, 2014 na6: 16 PM
Chaizvoizvo chikuru poindi Doug! Inbound inoshanda kana iwe ukasvika pamberi pevanhu vanoziva vane dambudziko. Asi vanhu vazhinji havazive kuti vane dambudziko kudzamara vaona imwe sarudzo kune yazvino mamiriro. Ndo izvo zvinobuda zvinokuitira iwe. Mune bhizinesi redu, Facebook inzira inoshamisa yekushambadzira kunze. NaFB tinogona kunongedza zviri nyore vanhu vangave shamwari dzevatengi vedu varipo kana vanhu vanogovana hunhu hwevatengi vedu varipo.
Yakakura posvo uye nzwisiso.